I-LG yokuPhehlelela i-LG V35, X5 kunye ne-X2 eMzantsi Korea ngoJuni | I-Androidsis
I-LG ukumilisela i-LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 kunye neX2 ngoJuni
UEder Ferreño | | LG, Izaziso
Yonke into ibonakalisile ukuba u-2018 uzakuba ngunyaka okhululekileyo kwi-LG kwintengiso yemfonomfono, kodwa kubonakala ngathi izinto ziza kwahluka. Kungenxa yokuba inkampani yaseKorea ilungiselele ukwazisa okumbalwa, okuza kwenzeka ngoJuni. Ukusukela emva kokubonisa isiphelo sayo esitsha, kunye nokuphinda kuhlaziywe phakathi kuluhlu kule veki, ifemi ineefowuni ezingaphezulu ezisilungeleyo.
Okokuqala, isiphelo esitsha esitsha, i-LG V35 iya kuba ngowokufika olandelayo. Kodwa le fowuni ayizukuza yodwa kuba izixhobo ezingaphezulu ziya kuza, njengeX5 okanye iX2, apho kungekho nto yaziwayo kude kube ngoku. Ke ithembisa ukuba iyinyanga enkulu yohlobo.
I-LG V35 sisiphelo esitsha sophawu lwesiKorea, eya kuthi ngokuqinisekileyo ize ne-ThinQ njengegama. Kuba ifemu ibheja kakhulu kubukrelekrele bokufakelwa kwiifowuni zayo ezintsha ngaphakathi kuluhlu oluphezulu. Zimbalwa iinkcukacha ezaziwayo malunga nesixhobo, njengokuba iya kuba ne-Snapragon 845 njengeprosesa.
Ifemi ibonise le veki i-LG Q7 kunye ne-Q7 Plus kunye ezi modeli kulindeleke ukuba zifike kwilizwe labo lokuzalwa kuyo yonke inyanga kaJuni. Ke bayabomeleza ubukho babo kuluhlu oluphakathi kwintengiso ebalulekileyo njenge Mzantsi Korea.
Ekugqibeleni, Ifemi iya kuzisa i-LG X5 kunye ne-X2 eMzantsi Korea, izixhobo ezimbini ezifikelela kuluhlu lokufaka. Baya kuba neenkcukacha ezilula kwaye baya kuba neMediaTek MT6750T njengeprosesa, ukongeza kwi-2 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina. Nangona ziyilelwe ukunika ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza kakuhle ngokubanzi.
Okwangoku entweni ukumiliselwa kwezi fowuni ngoJuni kuya kuba seMzantsi Korea kuphela. Zonke ezinye iimarike ziya kulandela kamva. Kodwa asinalo ulwazi malunga noku ukuza kuthi ga ngoku. Ke sinokulinda kuphela ukubona oko kulungiselelwe yi-LG.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG ukumilisela i-LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 kunye neX2 ngoJuni
UManu Sc sitsho
Ukubetha okungagqibelelanga kwe-LG, jsjaja
Phendula uManu Sc
Imifanekiso yokuqala yeXiaomi Mi Band 3 ihluziwe